YE'ZARNI - YEZARNI
For your Choice website
ကောင်းသော website များအားတတ်နိုင်သမျှတင်ထားပေးပါသည်
For Entratainment Gmail
Posted July 16, 2011 at 1:42 AM
Posted July 16, 2011 at 1:27 AM
Download and listen for myanmar music
Posted July 16, 2011 at 1:30 AM
you can listen Myanmar flash song monlaymawlamyine.multiply.com/
Posted July 17, 2011 at 7:14 AM
You can see movie
Posted July 17, 2011 at 7:30 AM
Posted August 1, 2011 at 4:16 AM
Want for software and interesting Ebook
Posted July 16, 2011 at 1:38 AM
For Technology nayminmaung
Posted July 16, 2011 at 1:23 AM
For job JOB
You can search for job
Posted July 17, 2011 at 7:20 AM
http://www.myvido1.com/ for video www.myvido1.com
Posted August 1, 2011 at 3:30 AM
www.freemyanmarvcd.org myanmar movie www.freemyanmarvcd.org
Posted August 1, 2011 at 4:41 AM
ရဲဇာနည် ဆီလာသော သူများအားလုံးကို ကြိုဆိုပါသည်
connection မကောင်းသူများအတွက်ိ် Dsl speed v7 လေးပါ ကျွန်တော် အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားထားပါတယ် ၀င်ရောက်လေ့လာတဲ့သူများကိုကျေးဇုးအထူးတင်ပါသည်အကြံပေးခြင်း သို.မဟုတ်မေးမြန်းလိုပါက yezarni42@gmail.com သို.ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်သူငယ်ချင်းများအတွက် flash song လေးပါ၇ုပ်သေးရုပ် မျှော်လင့်မိတဲ့ ငါ့နတ်သမီးလေး ညီမလေးချစ်သူလမင်းသို. ချစ်ကံဆိုး ဒီဇင်ဘာည မ ချစ်တယ်ဟုတ် အချစ်အတွက်ကိုယ်စား အလွမ်းသင့်ပန်းချီ သူငယ်ချင်းချစ်သူ I love့ you Miss you ma MA အိလေးအတွက်ပထမအနမ်း အိလေးနဲ.ကျွန်တော့်ရဲ.ပုံပြင် မိုးထဲမှာ ကောင်မလေး နတ်သမီးချစ်တဲ့ပင်လယ် Noteequal ရှိနေပါ(yelay) ရင်ခွင် မင်းသမီးလေး မီးအိမ်ရှင်မင်းမထွက်သွားခင် ခေါင်းစဉ်မဲ့အလွမ်း ကောင်မလေးသို. ကလေးဆိုးလေး မမကောင်လေး တစ်ချိန်ကချစ်ခဲ့ရတဲ့မ သံဇဉ်တွေနဲ.ချောသိပ့်ခွင့် မြင်နေခွင့်လေးပေး အိလေးအတွက်ဝအောင်ငိုမယ် တိတ်တိတ်လေးပါပဲ နှမြောတယ် ချစ်သူသိပါစေ လမ်းခွဲ ကော်ရုပ်လေး မင်းလေးသိစေဖို. ပြန်ခဲ့ပါ (Bay Gyi)်
Software လေးတွေပါ ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို.ထင်ပါတယ်
convert လုပ်ချင်သူများအတွက် အကောင်းဆုံး FREESTUDIO CONVERTER်Connection မကောင်းသူများအတွကDSL INCREASER photo grammer သမားတွေအတွက် ACDSee Photo Manager 12.0 Build 344'Driver Checkerလေးပါ INTERNETDOWNLOADMANAGER 6.07ံHard disk အမြဲသန်.ရှင်းနေစေဖို. Smart Drefrag လေးပါ နှစ်ချိူက်စရာ Water Animation လေးပါ Password Recovery bundle 2011 with keygen ကြိူက်လား Driver Genius PRO 10.0.0.712 + Crack and window7full glass thems' SD card 1GB to 2GB
သတင်းကောင်းလေးတွေပါ အလုပ်ရှာနေလား ? ၀န်ထမ်းကြော်ငြာလေးပါ အလွန်ကောင်းမွန်သောစာအုပ်စင် လေးပါ Job မှာအလူပ်ရှာကြစို..... 3ds_MaxDesign 2011(Ebook) Pro-ENGINEERWildfire(E book) Top password တွေဒေါင်းချင်လား၊ ? Copyright �2009